Huawei P20 Lite ကို Android9Pie | သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည် Androidsis
Huawei P20 Lite ကို Android9Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်
Nerea Pereira | | Huawei, NOTICIAS
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါတို့မင်းကိုပြောပြခဲ့တယ် အသစ် Huawei P20 Lite ကို 2019ယခင်အောင်မြင်သောပုံစံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောသတင်းအချို့နှင့်လာသည်။ သို့သော်အာရှထုတ်လုပ်သူသည်ယခင်မော်ဒယ်များကိုမေ့ထားပုံရသည်။ Huawei သည် Shenzhen အခြေပြုကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသည် Google operating system ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရရှိရန်အတွက်အသစ်စက်စက်ထုတ်လွှတ်မှုအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။
ငါတို့သည်ကောလာဟလသို့မဟုတ်ယိုစိမ့်အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အကြောင်းကြောင့်, သင်စိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။ စပိန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခြင်းကိုအာရှကုမ္ပဏီတခုကအတည်ပြုခဲ့သည် အန်းဒရွိုက်9Pie Huawei P20 Lite အပါအ ၀ င်ထုတ်လုပ်သူ၏ဆိပ်ကမ်းအတော်များများအထိဖြစ်သည်။
? Android9နှင့် Emui9တို့ကို Huawei Mate 20 Lite နှင့် Huawei PSmart + တို့တွင်ရနိုင်သည်။
? သင့်မှာ Huawei P20 Lite ဒါမှမဟုတ် Huawei PSmart ရှိပါသလား။ ယခုသင် Android9နှင့် Emui 9.1 သို့မွမ်းမံနိုင်သည်
? သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာရှိတဲ့သတင်းအားလုံးကိုရှာဖွေပြီးသင်၏ Huawei စမတ်ဖုန်းကိုဆက်လက်ခံစားပါ
- Huawei Mobile Spain (@HuaweiMobileESP) ဇြန္လ 12, 2019
၎င်းသည် Huawei P20 Lite ကဲ့သို့ Android9Pie ကိုရရှိမည့်မိုဘိုင်းလ်များဖြစ်သည်
အာရှထုတ်လုပ်သူများကစပိန်နိုင်ငံရှိ၎င်း၏ Twitter အကောင့်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ဝေသည့်သတင်းစကားတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း 20 ခုနှစ် Huawei Mate 20 Lite, Huawei P Smart +, Huawei P Smart နှင့် Huawei P2018 Lite XNUMX တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် operating system ကိုရရှိလိမ့်မည်။ Mountain View-based ကုမ္ပဏီကြီးမှ။ ဟုတ်ပါတယ်, မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းထုံးစံအလွှာအောက်မှာ Huawei EMUI ၉.၁ ။
ဒီ update ရဲ့အဓိကအားသာချက်တစ်ခုကတော့ Android9Pie မှာပါ ၀ င်တဲ့သတင်းကိုခံစားနိုင်ခြင်းအပြင်ဒီမော်ဒယ်များအားလုံးမှာ Huawei ရဲ့ GPU Turbo 2.0 နည်းပညာရှိမယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့တွေဂိမ်းကစားနိုင်မှာပါ အရည်များများ။ လွှတ်ပေးသည့်နေ့နှင့် ပတ်သက်၍ သင်လုပ်နိုင်သည်ဟုပြောပါ သင်၏ Huawei P20 Lite ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။
အပ်ဒိတ်သည်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်လား။ စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ သင်လုပ်ရန်မှာ Settings ထဲသွားပြီး System option ကိုရွေးပြီးနောက်ဆုံးတွင် Update Software ကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ update ကိုရရှိနိုင်ပါက၎င်းသည်အလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းပါက၎င်းတို့သည်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်နည်းဖြင့်စတင်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei P20 Lite ကို Android9Pie သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်
အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုကြောင့် OnePlus7သည်ကင်မရာတိုးတက်မှုအမြောက်အများကိုရရှိခဲ့သည်